Ngelishwa, abantu abaninzi bafuna ukufumana amandla ngaphezu kweemvakalelo kunye neemvakalelo zabanye kwaye basebenzise kule njongo inxaxheba kwindlela yokusebenza kwengqondo njengento yokuxhaphaza. Ngokuqinisekileyo, abantu abawela ezandleni zalaba bantu, bahlala befuna ukuphepha kulo hlobo lolawulo. Umbuzo yindlela yokufunda ukumelana nomntu ongekho mlawuli kwaye ungawa phantsi kwefuthe layo?
Musa ukuqhubeka malunga neemvakalelo
Abaqaphi bahlala beyazi indawo zakho ezigulayo kunye namava. Ngoko ke, bahlala bexinzelela kwiindawo ezibuhlungu ukuze bafezekise umphumo. Ngokuqhelekileyo abaxhasi babasebenzisa isimo sakho sengqondo kubo. Ukuba umlawuli wesazi uyazi ukuba uyamthanda kakhulu, uya kukusalela ngesimo sakhe sengqondo. Ngokomzekelo, umphathi wecala angachaza ukuba akayi kuxoxisana nawe, ukuba awuyikuzalisekisa iinqwenela zakhe, unokuyenza kwaye ufihle. Umzekelo, emva kokuva ukugatya kuwe, uqala ukucaphukisa, usongela kwinxalenye kunye njalo njalo. Ukuba ukhawuleza ukwenza yonke into, njengoko uthi, xolisa kwaye ufezekise zonke iifom, ke ukusebenza kwakhe kuphumelele. Ukuthintela oku kungenzeki, kufuneka ufunde i-idyll malunga neemvakalelo zakho. Enyanisweni, ngamnye wethu akafuni ukulahlekelwa ngumthandayo. Kodwa ukuba umntu onjalo ungumlawuli, kufuneka umbonise ukuba impembelelo yakhe kuwe ayiyi kuba nomphumo oyifunayo. Ukuba umntu uya kukuxabisa, uyayeka ukuzama ukuphatha nokuseka ubudlelwane obuqhelekileyo. Ukuba uqhubeka esebenza ngumoya omnye kwaye uqala ukuzalisekisa izithembiso zakhe, ngoko ulwalamano lwakho kuye alubhekiseli nantoni na umntu onjalo akudingayo. Ngoko ke, ukuba uqaphela ukuba umgcini-manipathi uqala ukudlala ngeemvakalelo zakho, vela ngokucacileyo ukuba uyaziqonda kakuhle iinjongo zakhe kwaye akayi kuhlaselwa yinkxalabo yakhe. Kunokwenzeka ukuba umntu akayi kuvuma ukuba uzama ukukuphatha. Ngokuphambene noko, uya kuqala ukudlala inceba okanye ukuqinisekisile ukuba uyiphutha. Akukho mzekelo "musa ukukhokelwa" ekuziphatheni okunjalo. Nangona ekhwaza, nakuba ekhala, gcina iimbono zakhe ezithembekileyo. Ukuba ubuncinane xa ubonisa umntu onokuyisebenzisa iifom, uya kuqhubeka ekwenzeni oku kubomi bakhe bonke. Ubuhlobo bakho buya kuba ngumzekelo wendlela yokuziphatha "inkosi-khoboka", apho umntu omnye enza nantoni na ayithandayo, kwaye okwesibini uyavuma kwaye uyavuma ukuba angafuni ukulahlekelwa ngumthandi wakhe.
Xa i-manipulator yesaziso sokuba "ixhoba" ayinakho ukuphazamiseka, unokutshintsha amaqhinga. Kule meko, umntu uqala ukulala ngokuncoma, uthetha ngendlela afuna ngayo inkxaso yakho kunye nokuninzi. Kule meko, zama kwakhona ukucinga ngenyameko kwaye ungayithobeli amazwi akhe. Khumbula ukuba umntu ulungele ukuthetha yonke into ukuze ekugqibeleni ivele njengoko ifuna. Kuyaziwa ukuba amantombazana abathanda indlebe, kangangokuba amaninzi amanxeba athile afanelekileyo afikeleleke ngokuchanekileyo oku kulungiswayo.Khumbula ukuba onke la magama adibanisa kwaye umntu uthetha ngokungafaniyo, kodwa kuphela ukufezekisa umphumo oyifunayo. , cacisa ngokucacileyo ukuba ngamagama amahle akayi kutshintsha into kwaye awuyi kuzalisekisa umnqweno wakhe ngenxa yokuba ubiza ngokuba unengqiqo kwaye unomusa. Ngokuqinisekileyo unomusa, kodwa kungekhona nalabo abazama ukukuphoqa ukuba wenze into engathembekanga.
Umntu angasetyenziselwa ukuziphatha kuphela, kodwa nezinto eziphathekayo. Kule meko, i-manipulator yenza umntu izipho, anike imali kunye njalo, ngelixa esithi akukho nto ifunekayo ngokubuyisela. Nangona kunjalo, ngokukhawuleza ukuba imeko ikhula, apho i-manipulator idinga naluphi na uncedo, ngokukhawuleza iphendukela kumntu awayinikezele kwaye ayikhohlwa ukuba uyayikhumbula impawu zakhe. Kule meko, akufanele uvumele ukuba uzive uzisola. Ewe, ukuba unyanisekile kwaye unomusa, ingcinga yokuqala efika engqondweni yakho: "Wenzé kangako kum, ndingayenqaba njani na?". Akufanele uzuze kwiimvakalelo ezinjalo, kuba umphathi wakho oqhelekileyo wenza zonke izenzo zakho kungekho sizathu. Ukuziphatha kwakhe akukuzimeli, ngoko awukwazi ukuziva unetyala phambi kwakhe. Ukuba unokukunika izipho kwaye wenze imiqondiso emihle njengaleyo, ngoko xa efika ngesicelo, akayi kucinga ngako. Kodwa kwiimeko xa konke kucatshangelwa kwangaphambili, abantu bayazama ukunyanzelisa isazela, bekhumbula ixesha elidlulileyo. Ngoko ke, xa umgcini wakho wesikhululo efika kuwe ngeengxelo ezinjalo, ungaba neentloni ukumkhumbuza ukuba yena ngokwakhe wathi: "Ndikwenza konke oku ngaphandle kwesizathu, andinanto nto kuwe." Ngokwemvelo, unokuqala ukuchazela izenzo zakhe, ukuvakalisa ukuba wayeqondwa kakubi (okanye ke, okanye ngoku), kodwa ekuziphatheni kwakhe nabantu abanjalo kubalulekile ukuba ahlale engagxininiswa. Khumbula njalo ukuba akufanele uqalise nabani na. Kodwa ukuba iimeko ezinjalo aziphindaphindi ukusuka ngoku ngoku, zama ukungaqondi izipho kunye nemiqondiso yenkxalabo kubantu ababaziyo kakuhle.
Ukuba umgcini-manipator uqala ukugxininisa ukuba ufanele uhlawule imali enye, unganqikazi ukubuyisela umntu owamkelayo kuye. Ngabantu abanjalo kungcono ukuba ningaba namatyala, nokuba niyazi ukuba okokuqala kubonakala ukuba kwenziwe kuphela ngenxa yezizathu ezilungileyo. Ukuba i-manipulator ishiywe ubuncinane ubuncwane obuncinci kwimpembelelo yempembelelo yengqondo, uya kuyisebenzisa kwaye iya kuqhubeka iphosa. Kwaye njengokuba uyayazi, umntu onokude ube ngumthombo wokunyusa, ugcine ukuhla kwaye unike umlawuli wesikhokelo ukuba aziholele aze azithobe phantsi kwimbono yakhe kunye neminqweno.
Xa kukho i-manipulator kufuphi nawe, ungaze uzame ukumcaphukisa uze wenze iimpazamo kwiinjongo zakhe. Ekudeni komphefumlo, umntu ngamnye uvakalelwa ngokungathandabuzekiyo, ufuna ukuyisebenzisa okanye ayikho, kuba ukunyanzelisa kuyimpembelelo yengqondo, apho umntu enyanzelekile ukuba enze izinto eziphambene neminqweno. Yaye ukuba uyayiqonda ukuba umntu uyakuchukumisa ukungaziphathi kakuhle, into ongayifuni ukuyenza-ngu-100% we-manipulator. Ukusuka kubantu abanjalo kungcono ukuhlala kude, kuba xa uthe wawaphula, awuyi kukwazi ukuma ixesha elide kwaye uyeke ukufeza iimfuno zakhe. Kodwa ukuba ngenxa yezizathu ezithile usasafuna okanye ufuna ukuba ngumkhonto kunye nomphathi wesikhombisi, yeka ukumelana namazwi akhe nokuziphatha. Njalo bonisa ukuba uyayiqonda ngokucacileyo iinjongo kunye nenjongo aqhubekayo, ukwenza izenzo zakhe kwaye akayi kuba phantsi kwakhe, nokuba wenza ntoni na.
Izizathu zengqondo zengxabano zentsapho
Izilwanyana zaseRom zixhaswe ngabalandeli baseCyril Serebrennikov
Iifolda zokwenza iifoto
Isaladi kunye ne-sausage yokubhema
Uya kuphi na iholide kunye nento oyithatha nawe?
IiCubes zobuhle: yenza i-tonic ebandayo-ekhayeni
Iphunga lephunga kwi-multivark
Indlela yokufumana umntu ukuba athathe isinyathelo sokuqala: Isifundo kubangelwa ngabasetyhini
Ukunyangwa kweenwele ukusuka ekulahlekelweni kwamanyathelo abantu
Amabali ama-7 amaninzi amanqaku atshabalalayo abathathi-ndlu-2 abachaphazelekayo ngexesha lonke lokubonisa